Momba anay - Shandong Shenya CNC Equipment Co., Ltd.
SHENYA CNC FAMPANDROSOANA FITAOVANA
Shandong Shenya CNC Equipment Co., Ltd. dia miorina amin'ny 2017, manana fitaovana laser sy cnc izy io. Shenya dia miorina ao amin'ny Zone Innovation Jinan, Faritanin'i Shandong. Ankehitriny dia manana ekipa efa voatokana voatokana sy ekipa R&D izy io. Mandrakizay ny haavon'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny haitao, ny fitantanana ara-tsiansa manara-penitra, ny kalitaon'ny vokatra tsara sy ny foto-kevitra momba ny serivisy mifantoka amin'ny mpanjifa no nahafahan'i Shenya CNC nahazo laza malaza sy mpanjifa mahatoky an'arivony an'arivony eo amin'ny tsena manerantany. Ny milina laser Shenya dia amidy tsara amin'ny tsena iraisam-pirenena toa ny Vondrona eropeana, Amerika, Moyen Orient, Azia atsimo, Azia atsimo atsinanana, Russia, Amerika atsimo, sns.
Shenya CNC dia nanolo-tena ho amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana vokatra marani-tsaina CNC toy ny fanamarihana, sokitra ary fanapahana fitaovana. Amin'ny alàlan'ny ezaka tsy manam-paharoa ataontsika, androany, Shenya CNC dia nanjary orinasa mpamokatra sehatra iraisam-pirenena lehibe. Ny vokatra avo lenta, avo lenta, azo antoka ary maharitra, miaraka amin'ny rafitra fiantohana asa tsy misy korontana maharitra sy serivisy aorian'ny fivarotana tonga lafatra, no nahatonga an'i Shenya CNC mpitarika indostrialy miavaka. Tongasoa hanatevin-daharana an'i Shenya CNC sy traikefa. vokatra sy serivisy kilasy voalohany miaraka amin'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao ... ……
SHENYA dia manana maodely milina maro, ao anatin'izany ny milina fanapahana Fibre; Masinina fanamarihana fibre; Masinina sokitra tamin'ny laser; Masinina fanapahana laser; Masinina laser famahanana mandeha ho azy; Fitaovana laser kely; Milina fanapahana antsy; Co2 Laser fanapahana milina; Masinina sokitra CNC, sns. Mandritra izany fotoana izany, azonay atao ny manamboatra ny vahaolana fitaovana mandeha ho azy ho an'ny filanao manokana. Ireto fitaovana ireto dia nampiasaina betsaka tamin'ny indostrian'ny dokam-barotra, indostrian'ny asa tanana, indostrian'ny fonosana, indostria fampitaovana fiara, indostrian'ny lakozia, indostrian'ny fanaka, sns.
Ny vokatra tsirairay dia dinihina mafy araka ny fenitra ISO9001 (QCS) sy ISO14001 (EMS) alohan'ny hametrahana azy eny an-tsena. SHENYA dia manohy ny iraka "manome ny mpanjifanay ny fitaovana laser laser tsara indrindra sy vahaolana" hanomezana ny mpanjifanay fitaovana tsara kalitao.
SHENYA manome serivisy alohan'ny varotra an-tserasera sy serivisy aorian'ny fivarotana any ampitan-dranomasina;
Raha te hianatra ny fomba fampandehanana ny milina ianao dia afaka manatona ny orinasanay ary hampianatra anao maimaim-poana izahay;
Ary aorian'ny fividianana ny masininay, raha amboarina ny ilaina dia hanampy anao izahay injeniera an-tserasera na handefa injeniera hanomezana anao serivisy mifanatrika manerana an'izao tontolo izao.
Mihaino, Matihanina; Famoronana faharanitan-tsaina sy famokarana faharanitan-tsaina
Masinina sokitra tamin'ny laser, milina fanapahana laser, milina fanamarihana laser, milina laser, fitaovana laser
Izahay dia mividy
Isan'ny mpiasa: olona 50 - 100
Varotra sy tsena
Markets lehibe: Amerika, Eropa, Azia atsimo atsinanana, Afrika, Oceania, Mid Atsinanana, Azia Atsinanana, Eropa Andrefana, Amerika afovoany ...
Volan'ny varotra isan-taona: US $ 350Million - US $ 500Million
Manondrana isan-jato: 50% - 60%
Haben'ny orinasa (Sq.meters): 5000 - 8000 metatra toradroa
Fanaraha-maso kalitao: Ao an-trano
Isan'ny andalana famokarana 5
No. an'ny mpiasa R&D: olona 10 - 20
Ny an'ny mpiasan'ny QC: olona 10 - 20
Isan'ny andalana famokarana